Post by Admin, Jul 10, 2018.
HARGEISA, Somaliland—Sicir barar xad-dhaafa iyo go’doomin dhaqaale ayaa u jiheeyay Jamhuuriyaddan gooni-goosadka ah ee dhaqaalaheedu hooseeyo inay ku talaabsato guul la taaban karo oo ay kaga horreyso waddamo badan oo calaamka ah: dhaqaale bilaa kaash ah.
Adeega lacagta mobilada ayaa aad u horumaray tobankii sano ee lasoo dhaafay gaar ahaan qaaradda Africa; 10kii qofba qof ayaa isticmaala taas oo u dhiganta in qaaradda ay ka isticmaalaan 100 milyan oo qof. Waddanka Kenya ayaa hirgeliyay adeega M-pesa, kaas oo guud ahaan loo aqoonsan yahay inuu yahay adeegii ugu horreeyay ee adeega lacagta mobilada oo si dhaba u hirgelay, isla markaana waxa macmiil u ah 26 milyan oo ah kala badh dadweynaha ku dhaqan wadanka Kenya. Cilmi baadhis ay sameeyeen McKinsey & Co ayaa caddaysay in ka badan kala badh adeegyada lacagta mobilada ee dunidu ay ka shaqeeyaan wadamda dhaca koorfurta lama-degaanka Saharaha ee Afrika.
Faa’iidada adeega lacagta mobilada ayaa si cad looga dheehan karaa Somaliland, halkaasoo xaaladaha dhaqaale iyo maaliyadeed ay u saamaxday adeega Zaad oo ah adeeg ay bixiso shirkadda ugu balaadhan xaga isgaadhsiinta ee Telesom inuu fududeeyo ganacsiga meel ka mida meelaga ugu go’doonsan aduunka.
“Aniga musharkaygu wuxu iigu soo dhacaa Zaadka, kaashna waxaan isticmaalaa oo keliya markaan waayo adeega Zaad”. Sidaa waxa yidhi Qaasim Cali oo supermarket ku haysta casimadda Somaliland ee Hargeisa. “Waxaan doorbidaa Zaadka waayo lacagta ayuu kuu fududaynayaa, waxaanay hoos u dhigaysaa in lagu dhaco”
Waddanku wuxu daabacdaa lacagtiisa gaarka ah, Somaliland Shilling, laakiin sarrifka 10,000 shillin ayaa u dhiganta hal dollar, sida ay sheegeen sarriflayaashu. Arrintan ayaa sababta in lagacta dollarka ah aad loo adeegsado, taas oo waddanka kusoo gasha xawaalad ahaan ama hay’adaha gargaarka ee ka hawlgala halkna kuwaasoo lagacta ay bixiyaan ay tahay dollar.
Taniyo markii la furay sannadkii 2009, adeega Zaad oo macnaheedu yahay “Sahay” ayaa maata leh 850,000 macmiil, taas oo qiyaastii noqonaysa rubuc bulshada ku dhaqan waddankan. Bulshada ayaa u adeegsata Zaadka mobiladii hore iyo kuwa casriga ahba iyo barnaamij loogu talo galay adeegan.
Marka laga yimaado macaamilka u dhaxeeyaya moobil ilaa moobil, macaamiishu waxay lacagtooda shillingka ama dollarka ah ku shuban karaan moobilkooda iyagoo kaga shubanaya laamaha rasmiga ah ee shirkadda Telesom ama sarriflayaasha waddooyinka dhinacyadooda fadhiya.
Maadaama adeega lacagta moobilada aanu maamulin bangiga dhexe, macnaheedu maaha inay ka baxsan yihiin xayiraadaha saaran bangiyada caadiga ah sida ka hortaga maalgelinta argagixisada.
Cabdilahi Cabdiraxmaan oo kaalin shidaal ku haysta Magaalada ayaa wiigiiba mar laba joonyadood oo kaash ah la yimaada suuqa sarriflayaasha si uu lacagtaa ugu badasho dollar oo uu Zaadkiisa ugu shubto.
Macaamiisha Cabdilahi ayaa wax kaga iibsada shillinka Somliland. Laakin isagu wuxuu u baahan yahay lacag dollar ah sababtoo ah isagu wuxuu shidaalka kusoo iibsadaa dollar, lacagta qaybt ka mida wuxuu ku helaa zaad, taas oo hawsha u fududaysa xilligan adag ee sicir bararku kacsan yahay.
Telesom Shabeel Cup 2019